संकटमा गाउँका नौमती बाजा ! | Mechikali Daily
संकटमा गाउँका नौमती बाजा !
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: १७ पुष २०७५, मंगलवार ०४:४९
गुल्मी, पुस । ईश्मा गाउँपालिका–४ को कुखुरीका च्यान । धेरै दलित समुदाय भएको बस्ती । पहिले गाउँमा आवश्यक परे दुई÷तीन समुह र बाजा पुग्थे । अहिले धेरै परिवारमा आफ्ना बाजा छैनन् । मुसिकोट नगरपालिका–२ कोटफेराका ६८ वर्षीय रामबहादुर परियारले नौमती बाजा बजाउन थालेको ५८ वर्ष भयो । उनी बिशेषगरी सनाई बादक हुन् । १० बर्षदेखि बाजा बजाउन थालेका राम बहादुर अहिले पनि नजिक खबर गरे पुग्छन् । दुई दिन बजाएर मुस्किलले एक हजार पाउँछन् । ५८ बर्षसम्म पनि श्रमको मुल्य नपाएकोमा उनलाई दुख लाग्छ । ‘बाजा बजाएको कुनै मुल्य छैन, त्यसैले बँच्न गाह्रो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, खै कसरी पेशा धान्ने हो ।’
मुसिकोट नगरपालिका–१ पौदीका कासीराम परियारले बाजाको कमाइबाटै अहिलेसम्म घरपरिवारको खर्च धान्दै आएका छन् । उनलाई आफ्नो सबैभन्दा लामो उमेर नै बाजा बजाएर बिताएकाले अहिले पनि बाजा बजाउन छाड्ने मन छैन । उनले उमेर र शरीरले साथ दिएसम्म बजाउने रहर भएपनि बजाएको मुल्य बजार सुहाँउदो नभएका कारण बाँच्न मुस्किल पर्ने गरेको बताउनुभयो । गाउँमा कम्तीमा ११ जनाको समुहले नौमती बाजा बजाउँछन् । उनीहरुले बाजा बजाए वापत १० देखि २० हजार बुझ्छन् । ‘गाउँमा तोकिएको रेट छैन कसैले राम्रै पनि गर्छन, कहिलेकाहीँ थोरैमा पनि बजाउनुपर्ने बाध्यता पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुल्य नभएकाले दुवै पक्षलाई समस्या परेको छ ।’ जिल्लाका धेरै बाजा समुहहरुले पैसा र पेशाकै चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
चण्डीस्थान बाजा समुह चन्द्रकोटका युवा कृष्ण परियारले यो पेशा मुल्यका कारण व्यावसायीक बन्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सिकाई कटाई गर्ने र गाह्रो लगाउनेको समेत रेट हुँदा आफुहरुले मुखको मुल्यमा बाजा बजाउनु परेको बताउनुभयो । ‘यो पेशामा मुल्य र सम्मान नभएकाले युवा आकर्षण छैन,’ उहाँले भन्नुभयो,‘त्यसैले पाको पुस्तालेनै नौमति बाजा जोगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ उहाँले गाउँमा पुजा गर्ने ब्राहमण र आफुहरुको समस्या उस्तै रहेको बताउनुभयो ।
इस्मा गाउँपालिका ५ का सुमन्त परियारलाई मेला महोत्सवमा बाजा बजाउने मान्छे खोज्दा सास्ती हुने गरेको छ । गाउँमा बाजा बजाउने धेरै छैनन् । बजाउनेको पुस्ता पनि उमेर ढल्किएकाले धेरै टाढा पुग्न सक्दैनन् । ‘गाउँमा एकै दिन मेला महोत्सव र पर्व परे बजाउने खोज्न अर्को गाउँ पुग्छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेका युवाहरु बाजा बजाउनभन्दा बिदेश पस्न खुसी मान्छन् ।’
आवश्यक परेको बेला सनाई बजाउन आफु तीन गाउँपालिका चहार्ने इश्मा गाउँपालिका– ४ का लक्ष्मण परियारले बताउनुभयो । ‘कहिलेकाहि मान्छे नपुगेर समस्या हुन्छ । म पनि धेरै ठाउँ पुग्ने र अरुलाई पनि आवश्यक परे बोलाउँछु,’ उहाँले भन्नुभयो,‘ मेरो उमेरका बिरलै छन् ।’
जिल्लामा पञ्चे बाजा संरक्षणमा खासै उल्लेखनीय काम भएका छैनन् । तर काम नै नभएका भने हैन । केही समय अगाडी एकीकृत ग्रामीण विकास समाजले तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा घमिर, अर्जे र छापहिलेमा बाजा मर्मत र पोशाक वितरण गरेको थियो । भने गत बर्ष पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तरगत जिल्लाका १७ स्थानका दलित समुदायलाई नयाँ बाजा खरिद र मर्मतको लागि आर्थिक सहयोग गरिएको एकीकृत ग्रामीण विकास समाज हिरा अर्यालले बताउनुभयो ।
इस्मा गाउँपालिकाले यो बर्ष संस्कृति संरक्षण भनेर पाँच लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । जस अन्तरगत गाउँपालिकाले इस्मा गाउँपालिका ५ गावँ दलित समुदायलाई बाजा गरिद गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले बताउनुभयो । उनीहरुलाई आवश्यक पोशाकको समेत व्यावस्था गरिने बस्नेतले बताए । त्यस्तै जिल्लाका अरु स्थानीय तहमा पनि यो कामको थालनी भएको छ । केहि समय अगाडी वामी विश्व सम्पर्क मञ्चले नौमति बाजा संरक्षणको लागि महोत्सवको आयोजना गरेको थियो ।